Fiderana an-kira : namoaka ny « DVD Best of » i Honoré | NewsMada
Fiderana an-kira : namoaka ny « DVD Best of » i Honoré
Hira fiderana, mizotra amin’ny sehatra matihanina kokoa. Miakatra tsikelikely amin’ny fampahafantarana ny sanganasany ny tarika Honoré amin’izao fotoana izao.
“Mety ivoizana ny fiderana an’Andriamanitra avokoa ny gadon-kira rehetra”. Tsotra sady mazava ny fanazavan’i Honoré mikasika izay. Porofon’izany, tsapan’ity mpanakanto ity mihitsy fa vetivety kokoa ny fiantefan’ny hafatra any amin’ny mpandray azy, rehefa hatao an-kira ny fitoriana.
Nisy ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety, omaly, tetsy Ankadifotsy, nataon’ny tarika Honoré. Nentin’izy ireo nampahafantarana ny vokatra manokana, “DVD Best of” io, izay hivoaka amin’ny alatsinainy ho avy izao. “Fitambaran’ireo hira rehetra taloha sy vaovao, nanamarika ny tarika, nanomboka ny taona 2013 niforonany ity. Mila haparitaka ny sanganasa ho henon’ny rehetra ary izay ny antony”, hoy ny nambaran’i Honoré.
Izy no mpamoron-kira sy lehiben’ny tarika Honoré. “Tsy manavaka fiangonana sy finoana izahay fa izay hiparitahan’ny fiderana an-kira ho an’ny besinimaro no tanjona”, hoy ny nambarany.
“Misahana kokoa ny lafiny ara-javakanto aho, ary nisahana ny fandrindrana sy ny fandraisam-peo ny hira. Tsapako fa mora tafita kokoa ny hafatra anantin’ireo hira ireo”, hoy ny nambaran’i Felaniary. Samy mpanakanto rahateo no miara-miasa ka tsy sarotra ny fifandraisan’ny tadin-dokanga.
“Mivelatra ny tarika Honoré, ary miara-miasa amina mpanakanto maro. Mivelatra amin’ny gadona isan-karazany, toy ny tsapiky, salegy, zouk love, country, sns”. Hoy hatrany ny nambararan’ny lehibeny. Fantatra fa ao anatin’ny fitetezam-paritra izy ireo amin’izao fotoana izao. Hihazo an’i Fianarantsoa, hanamarika ny “Tsiahy ho an’i Adeline”, izay hotontosaina ny asabotsy 18 marsa izao, ny tarika Honoré. Aorian’izay, ho any Toliara, Toamasina, Antsiranana, sns.